सातामा १४ अर्ब ६४ करोडभन्दा बढीको शेयर कारोबार, परिसूचक १८.५९ अंक बढ्यो - Pugcha.com No 1 News Portal from Nepal in Nepal
सातामा १४ अर्ब ६४ करोडभन्दा बढीको शेयर कारोबार, परिसूचक १८.५९ अंक बढ्यो
Pugchha - 2020 Oct 10 09:45 AM Tweet
असोज २४, काठमाडौं । गत साताको तुलनामा यो साता शेयर बजार १८ दशमलव ५९ अंक माथि उक्लिएको छ ।
साताको पाँच दिनको कारोबारमा तीन दिन बजार बढ्दा परिसूचकमा उक्त अंकको वृद्धि देखिएको हो । गत साताको अन्तिम कारोबार दिन असोज १५ गते बिहीवार बजार १ हजार ५७१ दशमलव शून्य ४ विन्दुमा थियो ।
यो साताको अन्तिम कारोबार दिन असोज २२ गते बिहीवार भने बजार १ हजार ५८९ दशमलव ६३ विन्दुमा बन्द भएको हो । यो साताको कारोबारमा बजारले १ हजार ६०० विन्दु पार गरेको थियो । यस अघि फागुन १५ गते नेप्सेले उक्त विन्दु पार गरेको थियो । असोज २१ गते बुधबार १ हजार ६०० दशमलव ९७ विन्दुमा बन्द भएको बजार बिहीवार भने घटेको हो ।
यतिवेला सूचीकृत कम्पनीहरुले लाभांश प्रस्ताव गर्ने क्रम चलिरहेकाले पनि लगानीकर्ताहरु सम्भावित प्रतिफललाई ध्यानमा राखी कारोबारमा सहभागी भएको पाइएको छ । पछिल्लो समय सस्तो मूल्य भएका शेयरप्रति लगानीकर्ताहरुको आकर्षण बढेको छ ।
यो साता लघुवित्त र वित्त समुहका कम्पनीहरुको शेयरमा लगानीकर्ताहरुको अलि बढी आकर्षण देखिएको छ । साताको पहिलो दिन आइतवार १४ दशमलव ७१ अंकले बढेको बजार दोस्रो दिन न्यून अंक ३ दशमलव ६३ अंकले घटेको थियो ।
तेस्रो दिन ४ दशमलव १७ अंक र चौथो दिन १४ दशमलव ६८ अंकले बढेको बजार अन्तिम दिन भने ११ दशमलव ३४ अंकले घटेर बन्द भएको छ । अन्तिम दिन लगानीकर्ताहरुले आफ्नो नाफा बुक गरेका छन् ।
लामो समय निरन्तर बजार घटेकाले पछिल्लो समय पनि लगानीकर्ताहरु निरन्तर बजार बढ्नेमा ढुक्क हुन सकेका छैनन् । केहि दिन निरन्तर बजार बढ्यो भने आत्तिएर नाफा बुक गर्ने लगानीकर्ताहरु बढेको ब्रोकरहरु बताउँछन् ।
‘बजारले उच्च विन्दु कायम गरेका बेला प्रवेश गर्ने लगानीकर्ताहरु यतिवेला आफ्नो पोर्टफोलियो ब्यालेन्समा आएको बताउन थालेका छन्’, एक ब्रोकरले भने, ‘उनिहरुनै थोरै पोर्टफोलियो माथि जाने वित्तिकै आत्तिएर नाफा सुरक्षित गर्ने गर्छन् ।’
पूर्ण प्रविधिमैत्री बनेको शेयर बजारमा अनलाईन लगानीकर्तानै १ लाखभन्दा बढी पुगिसकेका छन् । अहिले ब्रोकर अफिसमै धाएर कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको संख्या ९० प्रतिशतले घटेको ब्रोकरहरु बताउँछन् । अहिलेकै अवस्थालाई हेर्दा बजारले निरन्तर गति लिने विश्वास पनि उनीहरुकोे छ ।
यो साता बजारमा रू. १४ अर्ब ६४ करोड ७३ लाख ८९ हजार बराबरको ५ करोड ४४ लाख १८ हजारर ६०३ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ । गत साताभन्दा कारोबार रकम ३ अर्ब २२ करोडभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ भने सातामा करीब २२ लाख कित्ता बढी शेयर कारोबार भएको छ ।
गत साता रू. ११ अर्ब ४१ करोड ९६ लाख १५ हजार बराबरको ५ करोड २२ लाख २५ हजार ३३३ कित्ता शेयर कारोबार भएको थियो ।
यो साता ठूला कम्पनीहरुको कारोबार मापक सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि ४ दशमलव ५९ अंकले माथि पुगेको छ । गत साताको अन्तिम कारोबार दिन ३१० दशमलव १५ विन्दुमा रहेको सेन्सेटिभ इन्डेक्स यो साता ३१४ दशमलव ७४ विन्दुमा पुगेको हो ।
सातामा तीन दिन बढेको बजारमा लगानीकर्ताको सम्पत्तिको मूल्य रू. २१ खर्ब १८ अर्ब ८० करोड १० लाख पुगेको छ । सातामा कुल बजार पूँजीकरण रकममा रू.२५ अर्ब ६५ करोड २० लाखले बृद्धि भएको हो । गत साताको अन्तिम कारोबार दिन कुल बजार पूँजीकरण रकम रू. २० खर्ब ९३ अर्ब १४ करोड ९० लाख थियो । अभियान दैनिक बाट साभार